DAAWO VIDEO:Madaxweyne Hirshabelle Waare”Diyaarada Qaaday xasan Sh.iyo Sheekh Sharif Maxkamad Baan La Koraynaa” | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Previous articleDAAWO MUUQAAL:Dhoobo oo Sir Mudo Qarinayey Sheegay”Deni Lacag Qaado oo Yes man Noqo Buu I Yiri”
Next articleDHAGEYSO XASAASI: Puntland ‘‘Ciidanka wax saameyn ah kuma yeelan xil ka qaadistii Dhooba-Daareed” & Somaliland oo loogu hajnabay in…
Ahmed November 10, 2019 At 8:30 pm
Lugta Gareen imika isagu xitaa qibladiisii ayaa noqotay Muqdisho. Berigii hore waxaa loo ogolaa inyar oo dadnimo ah. Inuu salaada qiblada saxda ah ee Woqooyi u tukado iyo inuu afkiisa iska heysto oonu noqon makarafoon ama sameecad laga hadlo. Imika isagu wuxuu noqoday Nin marna lugta loogu xidho Muqdisho siiba Sariirta Farmaajo ama Kheyre ama kolba cidey u wajiishaan inay isaga edbiso. Wuxuu noqoday Ricord kolba cajalad duuban lasoo geliyo oo fariintii la rabo lagu dhiibto.
Imika hadalkaasi kasoo baxey ma’ahan mid run iyo xaqiiqada ku saleysan. Waa Farmaajo iyo Kheyre oo Madaxweyaashii ka horeeyay is leh ku amarku taagleeya. Laakiinse daaha dabadiisa wax ka hayaga iyagoonan kareyn iney toos indhaha ugu caseystaan sababo ka garan kari awgood. Lugta Gareen wey ku shubteen hadalkaasi. Berigii hore waan ka nixi jiray oo miskiinah ayaan odhan jiray, imikasr Bagah ayaan leeyahay. Isaga iyo Asaahiiska riqiiska ama diciifka ah kolba sidii ladoono haloo isticmaalo.
mahac November 10, 2019 At 9:02 pm
Ahmed SNM miyaad sarkhaansantahay maanta mise xanuunkii aad dawlada Soomaliya u qabtay ayaa maskaxdaadii isku dhex yaaciyey? Mowduuca meesha ku qoran iyo waxa kaa dhex guuxaya ee kaa soo burqanaya waa kaaf iyo kale dheeri sidaan ayaa loo xanuunsadaa ama xanuunba waa la iska daayaa ilaahoow caafimaad sii adiga awoodee aamiin.
jubalander November 10, 2019 At 9:48 pm
@Ahmed,cid CID ku amarku taaglaysaa maa jirto,laakiin mucaarad iyo Somalidiid sida ay u macneeyaan waa gooni,Farmaajo iyo Kheyre waddankaa xoog Kuma ay qabsan,shacabka ayaa doortay,berri wey tagi doonaan ama way Soo noqon doonaan,taa Allah in baa og,laakiin muhiimadfu waa in ay gaarsiiyaan dowladnimada,meel qof waliba oo Somali ah uu codkiisa dhii an karo isaga oo xor ah,haddii ay taasi dhacdo muran iyo is qabqabsi dambe maa jiri doono insha Allah
Jubalander November 10, 2019 At 9:56 pm
Shiine miyaad I block garaysay?webkaan ugu yaraan 12 Mar ayaa maalin walba furaa,asxaab badan ayaan kusoo xiray webkaan,comenti badan maa dhiibta illaa muhiim tahay sidaa ula socda ” Shiino buuhoodle”😠
Ahmed November 11, 2019 At 3:39 am
Hacoo yahow adiga ayaa sakhrad qabiileysani ku heysaa. Doqon yahow xumi. Lugta Gareen waxaas uu afkiisa ka yidhi ayuunbaan anigu fasiray. Ma waxaad imika igu leedahay ninkani ma rabaayadeysna? Waa rabaayad baari ah weliba. Waa rikoordh kolba cajaladii la geliya uun dheela. Isaga iyo Lafta gareenba waa la rabaayadeystay. Xaafna qolkii lagu xakameynayay ayuu ku Jiraa. Isagu waa odey gaboobey oo lama rabaayadeyn karo laakiinse ka soo socda ee GalMudug lagu soo wado waa la rabaayadeyn doonaa. Waa saansaantu sidey u egtahaye.
Lugta Gareen hadaalkaas dheh ayaa lagu yidhi. Isagu maba laha awood uu Garoon diyaaradeed uga hadlo. Haduu awoodaas leeyahay ama xigtaadi dhab tahay waa la shaacin lahaa. Dadkii dhana waa loo wada sheegi lahaa.
Ahmed November 11, 2019 At 4:00 am
Sxb Farmaajo iyo Kheyre waxey is moodsiiyeen iney iyagu wadanka leeyihiin. Waa rag aanan waxba xeerin oo dadkii kala geynaya. Aniga waxba Federaalka igama khuseeyaan oo wadankaygii waan la noqdey, laakiinse Farmaajo waxa uu ka noqdey oo uu caqabad ku noqdey shardigii uu ku noqdey Madaxweynaha.
Muu fulin balamihii uu qaadey. Waxa uu weerarey mucaaridkiisii oo dadbuu laayay. Waxa uu ogolaadey in Qalbi dhagax la dhiibo. Waxa uu wehel ka dhigtey Ethiobiyaduu isku kaaya necbeyn jirey. Waxa uu fuushan yahay diyaarad uun. Waxba dadkiisa uma sheego oo lama hadlo. Ma sii wadaa. Maantoo dhanbaan ku Jiri karaa.
Doorasho hal cod iyo hal qof ah ma gaadhsiin karo wadanka. Runtii wuxuu ka tegayaa isagoo wadanku ka xun siduu ahaa markuu la wareegey.
Madaxweynayaashii ka horeeyay xitaa kamay fakan. Waakaa kolba meeshaanu Rabin iney tagaan u diidaya.
Sxb anigu haayoo mucaarad baan ku ahay Farmaajo. Laakiinse mucaaradaydu Qabiil kuma salysna. Markuu yimid wakhti waan siiyay. Laakiinse waxaan ka mid ahay dadkii ugu horeeyay ee arkay tayo yarida Farmaajo iyo mucangagnimadiisa. Taasna maanta dadkii taageeri 90% ayaa ila arkey oo nacey Farmaajo.
Jubalander November 11, 2019 At 4:38 am
@Ahmed,Farmaajo anigu qabiil ahaan Uma difaacayo ama waxa la yiraa Daaroodism,laakiin marka runta laga hadlayo Farmaajo iyo Kheyre 98% way ka fiican yihiin labadii tuug we midina Kampala ka dhistay guryaha ka kala a ka dhistay Ankara iyo Istanbul, nin rag ah noqo oo xaqqa iyo runta ka hadal haddii aad dhimanaysid xittaa, Hal Mar runta ka hadal,yet Caasimadda iyo qabiil ku qaadin ” runta ka hadal xitaa haddii ay dab ka kulushahay” waa maahmaah chayniis ah,ka bacdi waxaad doontid ku hadal
Ahmed November 11, 2019 At 4:58 am
Runtu waa Farmaajo labadii ka horeeyayba wuu ka liitaa. Farmaajo maxaa cusub ee uu Keeney. Intii yareyd ee la dhoobdhoobey ayuu xitaa kala daadiyay. Waxa Keli ah een u qiri karaa waa wuu ka tacliin badan yahay uun. Tacliintaasna wuu ku khasaartey oo tayo umay yeelin.
Qof wax garanayaa Farmaajo maanta ma amaani karo. Wadar iyo waaxid keebaa saxsan. Berigii hore intayada tayo xumida Farmaajo aragtey ayaa ka yareyn inta ama jeckeyd ama wakhtiga u kordhineysay amaba u dulqaadaneysay. Imika se anagaa ayaa idinka boqolkuiba sahaashan.
Kolkaas aniga dhaliisheyda Farmaajo wey qodobeysan tahay. Adigu ma waxaad ku jirtaa kuwa yidhaa Siyaad Bare iyo Farmaajo cidina umay dhaxeyn?